ဆယ်ကျော်သက် Patti သည်အိန္ဒိယ Poker ကို Hack Tool ကိုသတ်မဲ့ကင်-ကို iOS-Android မှာ Facebook က-
ဆယ်ကျော်သက် Patty အိန္ဒိယလူမျိုး Poker တစ်ဦး Poker ဂိမ်း Android မှာ, iOS က နှင့် Facebook က. ဒီဂိမ်းကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းလိုချစ်ပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. သင်သည်ချစ်ပ်များထဲကပြေး လာ. နှင့်သင်မကစားနိုင်? အလုပ်၏တစ်ပါတ်ပြီးနောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း tool ကိုခိုးချ ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်း.
ဆယ်ကျော်သက် Patty အိန္ဒိယ Poker Hack Tool ကို Unlimited Chips တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် hack က tool ကို သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်. သင့်အဘို့အကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် iOS က, Android မှာသို့မဟုတ် Facebook. ကိုယ့် hack က tool ကိုမှသင်၏ platform ကိုရွေးပါ , သင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင် / Hack Add ကိုကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ပျော်မွေ့ need.Then ချစ်ပ်များ၏အလိုရှိသောငွေပမာဏကိုရွေးပါ ;). ဒီ tool အားဖြင့်သင်တို့ကို add နိုင်ပါတယ် အဆမဲ့ချစ်ပ်များ ငွေနှင့်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်. သင် Android သို့မဟုတ် iOS အတွက်ဒီ hack ကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် , jailbreak သို့မဟုတ် Root မလိုအပ်.
download ဆယ်ကျော်သက် Patty Hack Tool.exe
သင်၏ platform Seleect (သင် facebook အတွက်သုံးလျှင် PC ကွန်ပျူတာဂိမ်းကို run Connect ကို click နှိပ် select လုပ်ပါ)
Hack Add / ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Johnny C. ကပြောပါတယ်:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2014 တွင် 7:21 ညနေ
ငါ့ကိုအ Thanks.Add 99999 chips
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2014 တွင် 7:22 ညနေ
ဂျော်နီ Cool ကပြောပါတယ်:
ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ . အကြှနျုပျကို Added 9999 ပိုက်ဆံ THX
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2014 တွင် 7:23 ညနေ
Miller က ကပြောပါတယ်:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2014 တွင် 7:24 ညနေ
အလုပ်လုပ်ကိုင် hack က tool ကို .another ကောင်းသောအလုပ်အဖွဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2014 တွင် 1:31 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 တွင် 7:35 နံနက်
Jull Amson ကပြောပါတယ်:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 တွင် 9:01 နံနက်
ဒီအလုပျအတှကျကဲ့သို့ကြီးမား !!! အကြှနျုပျအဘို့ကောင်းသော…!! ကျေးဇူးတင်ပါသည်!!!
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2014 တွင် 1:59 ညနေ
Yogesh Jadhav ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2014 တွင် 8:15 နံနက်
ငါ၏အ accont ချစ်ပ်ထဲမှာ Add 999999999
jaysukh Patel ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 9, 2014 တွင် 4:23 နံနက်
မတ်လ 11, 2014 တွင် 1:22 ညနေ
မတ်လ 18, 2014 တွင် 6:20 နံနက်
Ashok Manghnani ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 18, 2014 တွင် 5:00 ညနေ
မတ်လ 19, 2014 တွင် 6:28 နံနက်